Top 5 ECN Brokas kacha mma na February 2021 | Ekpuchighị Uru & ọghọm
Top 5 ECN Brokas kacha mma nke 2021
Ndị ahịa ECN kacha mma? Dị ka ị nwere ike ịma, ahịa azụmaahịa bụ otu n'ime usoro azụmaahịa mmiri mmiri kachasị n'ụwa. Ma, ị nụla banyere usoro eletrọniki na-eburu ụwa ahịa site na nsogbu?
ECN, nke bu okwu achoputara maka Network Electronic Network, na enyere gi aka dika onye ahia ka i nwee ike isoro otutu ulo oru ego di na ahia.
N'ihi ọganihu ndị a na teknụzụ n'ime mpaghara ego, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-amalite iji usoro a nwere ike ịnweta karị - ECN. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, usoro a na-enye ndị na-ere ECN aka ka ha nwee ike ịzụ ahịa na netwọkụ nke ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa ndị ọzọ na-eji.
Maka ndị ahịa ahụ na - enweghị ike itinye aka dịka ha ga - achọ ịnọ n'oge elekere ahịa, ma ọ bụ ndị chọrọ ntakịrị ntakịrị - ndị na - ere ECN dị mma. Ka emechara., Onye na-achọghị tighter agbasa na ala ọrụ udu?
Anyị na Mmụta 2 Trade etinyela ntuziaka na ndị na-ere ahịa ECN, nke ga-ekpuchi isi nke ECN, ọtụtụ ndụmọdụ aka dị mma maka ihe ị ga-ele anya, yana n'ezie - ndị ahịa ECN 5 kacha mma maka ị tụlee.
Libertex - CySEC Regulated Forex na CFD Trading Platform
Azụmaahịa CFDs na Forex na ntọala mgbasa ozi efu
Commlọ ọrụ ịzụ ahịa dị ala na enweghị ụgwọ zoro ezo
Zụọ ahịa na ntanetị ma ọ bụ site na ikpo okwu MT4
Gaa na Libertex
Kedu ihe bụ ECN Broker?
Na nkenke, mgbe a bịara n'ịzụ ahịa nke ego mba ofesi, ihe a na-elekwasị anya bụ inweta uru dị ukwuu dị ka ị nwere ike, yana oge ọ bụla enwere ike. Na Forex ahịa enwere ọnụọgụ abụọ dị iche iche nke ndị na-ere ahịa. Firstly, anyị nwere Ndị na-ere ahịa STP; nke pụtara 'nhazi site na nhazi'. Nke a bụ 'onye etiti' na-agagharị n'etiti ndị na-enye ego na gị (onye ahịa ahụ).
Nke abuo, mgbe ahụ, ị ​​nwere ndị na-ere ECN, nke mepụtara ụzọ ịkpọtụrụ kpọmkwem n'etiti gị (onye ahịa ahụ), na ndị na-eweta akụ azụmaahịa (ndị na-enye ego mmiri). Ihe kachasị na-eme ka onye na-ere ECN dị iche na onye na-ere ahịa ọdịnala bụ iji ECN 'sistemụ'.
Usoro a na-enyere ndị na-ere ahịa na ndị na-azụ ahịa n'ime mgbanwe ahụ aka ka ha nwee ike ịchọta egwuregwu maka ọnọdụ azụmaahịa ha, yabụ dị ka onye na-azụ ahịa, ị ga-enwe ohere ịnweta ọtụtụ ndị mmekọ ndị ọzọ na ahịa ego site na iji ụdị onye na-ere ahịa na ahia.
N'ihi eziokwu ahụ, ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ ọnụahịa ndị na-emekọrịta ahịa ọnụ jikọtara ọnụ, onye na-ere ahịa ECN nwere ike ịnye gị ọtụtụ oge ị ga-agbasa ngwa ahịa ka mma yana ọnụego ọrụ ka mma More na nke ahụ mechara.
Kedu uru nke ndị na-ere ahịa ECN?
Iji nweta Forex trading ahịa, ị ga-ebu ụzọ chọta onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị. Nke a bụ n'ihi na a naghị eme forex n'otu ụzọ ahụ dị ka mbak na akụ ndị ọzọ, ọ bụghịkwa azụmaahịa azụmaahịa na otu mgbanwe mgbanwe.
Dabere na onye na-ere ahia ị na-eji, ị nwere ike ịnweta ohere n'ọtụtụ ọnọdụ ahia na ọnụego mgbanwe. Họrọ ikpo okwu ziri ezi maka ụdị onye ahịa ị bụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọ onye ahịa ahia na-aba uru, ọ bụkwa ebe a ka ndị ahịa ECN kacha mma nwere ike inyere gị aka.
Na-ebido mgbe niile site n'ịhụ na onye na-ere ahịa ECN ị họọrọ, ma ọ bụ na-eleba anya n'ime ya, nwere ikikere zuru oke ma hazie ya. Ga - ahụ na ọtụtụ ndị na - ere ahịa na - edebanye aha na ihe karịrị otu njikwa, oge ụfọdụ ọtụtụ. Dika odi otua, nke a n’abia nchekwa ozo n’enye gi.
Nakwa ijide n'aka na onye na-ere ahịa ECN gị zuru oke, ị kwesịrị ịlele ugboro abụọ na ọ na-enye ụdị azụmaahịa na nyiwe ziri ezi maka gị. Na njedebe nke ụbọchị, nke a bụ nhọrọ onwe gị ma ọ dabere na ụdị azụmaahịa gị.
Ihe ole na ole ọzọ ị ga-atụle bụ nnweta nke njirimara teknụzụ, ọnọdụ azụmaahịa, nkwụnye ego kachasị mkpa, ịkwụ ụgwọ ụzọ ịkwụ ụgwọ, ụzọ abụọ ị họọrọ, yana n'ezie - na-agbasa.
ECN Broker vs Onye kere Ahịa
Tupu anyị lelee ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ, anyị kwesịrị ibu ụzọ ghọta ihe 'onye na-eme ahịa' bụ? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, onye na-ere ahịa bụ n'ezie onye na-ere ahịa nke na-esetị ajụjụ na ịrịọ ahịa site na iji usoro nke aka ha. N'ebe ụfọdụ, a na-akpọ nke a 'ịme ahịa'.
Ndị na-etinye ego nwere ike imeghe ma mechie ọnọdụ azụmaahịa na ahịa mgbe ha lechara ọnụ ahịa dị n'elu ikpo okwu nke onye na-ere ahịa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị na-ere ahịa anaghị etinye ọnọdụ ndị ahịa na ndị ọzọ na-eweta ego. Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ndị na-ere ECN kacha mma na-eme. Onye na-ere ahịa n'ahịa ga-efunahụ ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ rutere ebe ọ na-emeri n'ihi na a na-akwụ onye ahịa ụgwọ ọnọdụ ya na akaụntụ nke onye ahịa.
Dịka anyị kpuchiri n'elu, ndị ECN kacha mma dị iche na ndị na-ere ahịa ahịa, ọkachasị n'ihi na ha na-ekwe ka ọnụ ahịa sitere n'aka ndị na-enye ego dị iche iche ma ha nwere ike ịsọ mpi n'otu ụdị ahịa ahụ.
N'adịghị ka ndị na-ere ahịa ahịa, nyiwe azụmaahịa ECN na-enweta uru site na ịnweta ọrụ guzobere n'ọnọdụ ọ bụla. Nke a na-abụkarị n'ihi nnukwu olu nke ndị ahịa, yana ọrụ ECN na ụgwọ nwere ike ịdị ala na ntụnyere.
Gini mere m ji jiri ahia ahia ECN?
Ọ bụrụ na erebeghịrịrị gị site na nke a, ịzụ ahịa ụzọ abụọ site na onye na-ere ECN na-eme ka o doo anya na ị na-agbakarị ụdị atụmatụ na uru dị ka ndị ọzọ na-enweghị ụdị ahịa nwere ike ịnye.
Mgbe akụrụngwa teknụzụ na-arụ ọrụ nke ọma, ị nwere ike ịmalite azụmaahịa ozugbo, na-enweghị ichere maka onye ọ bụla.
Ihe kpatara ndị ECN kacha mma ji dị iche na igwe mmadụ
Dika anyi kpuchitere ihe di iche n'etiti uzo mbu nke uzo abuo nke ndi ahia mbu, ugbua anyi gha abanye n'ime ihe na eme ndi ECN brokers ka ha puta.
Enweghị ahia megide ndị ahịa ya
Nakwa ịkpọbata gị na ndị ahịa dị iche iche, onye na-ere ECN bụ naanị onye mkparịta ụka n'etiti ahịa na ịzụta iwu gị. N'okwu Layman, nke a pụtara na onye na-ere ahịa ga- mgbe ahia megide ọnọdụ gị. N'aka nke ọzọ, ndị na-ere ahịa STP amatala ahịa megide ndị ahịa ha site na imeghe ọnọdụ ndị na-emegiderịta onwe ha.
Otu ihe atụ nke a ga - abụ ma ọ bụrụ na gị dị ka onye ahia mepee ọnọdụ ịzụta (ogologo) na GBP / USD, mgbe ahụ, onye na - ere ahịa STP gị na - enye onye na - enye ego mmiri. Ma, ihe ị nwere ike amaghị bụ na onye na-ere ahịa STP nwere ike mepee ọnọdụ ire (mkpụmkpụ) na GBP / USD. Yabụ, nke a bụ kpam kpam-abụghị nke ọnọdụ gị ma si otú - a isi esemokwu nke mmasị.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi obere aka, ihe kpatara na ndị na-ere ahịa STP ga-eme nke a bụ na ọ bụrụ na idafu na GBP / USD ogologo ahịa gị, onye na-ere ahịa na-enweta ụgwọ. Ma, ọ bụrụ na n’aka nke ọzọ, ị ga-eme mmeri, na ore ahia ga-atụfu ya ego. Dị ka ndị dị otú a, omume ịzụ ahịa megide gị bụ nanị ihe ndabere maka onye na-ere ahịa.
Dika anyi kpuchiela nke oma, ndi oru ECN kacha mma adighi edozi ha ka ha nyefee ndi ozo. Kama, ị ga-emeli ya n’onwe gị
Zụ ahịa site na ECN na-abawanye nghọta
Ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa na-enweta netwọkụ ahụ, yabụ a na-ekwukarị na ndị na-ere ahịa ECN na-akwado ọnọdụ azụmaahịa mara mma. N'iji onye na-ere ECN na - egbochi oke ọnụahịa ma mekwaa ntụkwasị obi karịa ndị ọzọ na - azụ ahịa ọdịnala. Nke a bụ nnukwu n'ihi n'eziokwu na ọ naghị edozi ya jụọ ma na-arịọ ọnụahịa.
Ndị na-ere ahịa ECN na-emeghe ọnụ ụzọ maka ahịa na usoro ECN ma ọ bụ ndị ọchụnta ego Forex nwere mmasị. Site na ịnye gị ọnụego ọrụ gbanwere agbanwe (kama idozi ya) maka azụmahịa zuru oke, ị ga-achọpụta na mgbasa a na-enye dị oke ala karịa ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Nakwa ọnụahịa ziri ezi karị, ndị na-ere ECN kacha mma na-enyekwa ndị ahịa ọnụ ọgụgụ akụkọ ntolite ọnụahịa ziri ezi, yana akụkọ ndụ na nke ugbu a.
Site na iji ọnụahịa gosipụta yana isi mmalite, ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa ozugbo wee rie uru nke mgbasa siri ike. N'elu nkwenye ozugbo, ị ga-enwerịrị ohere ịnweta ọrụ ndị ae kwuru n'elu ma gbasaa nke ndị na-ere ahịa ECN na-enye. Inweta ohere okwu a ga - enyere gị aka izere ihe a na - akpọ 're-ruturu'.
Maka ndị na-amaghị, re-ruturu na-abịa mgbe a jụrụ usoro azụmaahịa n'ihi ngbanwe ọnụahịa nke akụ ịchọrọ itinye ego na ya. N'oge a, onye na-ere ahia na-ekwughachi ihe onwunwe dị na ajụjụ. Ntughari okwu anaghị arụ ọrụ mgbe niile maka ọdịmma gị ka ọ nwee ike inwe mmetụta dị njọ na arụmọrụ azụmaahịa gị ogologo oge.
ECN - Ichapu Middleman
Ndị etiti etiti anyị na-ekwu maka ha bụ ndị na-ere ahịa STP. Mgbe ịmalite ịzụ ahịa ị chọrọ ọtụtụ ụlọ ọrụ niile na-enye akụ maka ahia. na-enweghị ndị a na-akpọ ndị na-enye ego mmiri, ịzụ ahịa agaghị ekwe omume. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị na-enye ego na ndị ahịa anaghị agwa okwu ozugbo. Maka nke a, enwere 'ndị etiti'. N'okwu dị mfe, ọrụ ha bụ ime ka ndị otu azụmaahịa kwekọọ n'otu ebe ọrụ.
Mgbe ị na-azụ ahịa na ECN ore, ọ dịghị onye maara onye ị bụ. Otu uru bara uru nke ịbụ ndị a na-amaghị aha bụ na ahịa na-adabere na ọnọdụ ahịa n'ezie na ọnụ ahịa na-anọpụ iche.
Ọrụ Direct Market
Ndị na-ere ahịa ECN kachasị mma na-akwado ọnọdụ site na igbu ndị ahịa. Nke a pụtara na ha anaghị edekọ ọnọdụ onye ahịa ma gbalịa ijikọ ha na ndị na-enye ego. Nke ahụ bụ ịsị, ndị na-ere ECN kacha mma anaghị emepụta edemede ha. Kama nke ahụ, ha na-eji ndị na-enye ego mmiri dị iche iche enweta ọnụ ahịa ha ma nwee ike ịmekọrịta ahịa nke aka ha.
Nke a na ụdị ore nwere ike ịbụ karịsịa ịrịọ maka investors ndị na-achọ ime ka ibu azụmahịa, n'ihi na ndị a na-agbanwe agbanwe na-enye investors na-amaghị aha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ya.
Ka anyị were ya na ị mepee ọnọdụ maka GBP / USD ego (maka 1 ọtụtụ).
Kama onye na-ere ahịa gị ga-ekwurita ọnọdụ ya na onye na-eweta mmiri mmiri, usoro ikpo okwu ECN na-enye gị ohere isoro ndị GBP / USD kacha mma rụọ ọrụ na ikpo okwu gị.
Ọ bụ, n'ihi nke a, a na-ahụta akụ dị ka mmiri dị oke mmiri, ebe ewepụtara onye etiti ahụ na ngwakọta na ọ nweghị onye na-egbochi ndị ahịa azụmaahịa. N’ụzọ dị mkpa, you dika ndi ahia nwere ike zuta ma obu resia uzo abuo ososo ozugbo.
A na-agwa ndị na-arịọ ahịa ka ha gbasaa na ECN Markets
Dịka anyị metụrụ na mbụ, ndị na-ere ECN kacha mma bụ isi ụlọ maka ọtụtụ dị iche iche Forex ahịa ndị na-ere ahịa. Ndị a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ego itinye ego (nke a na-akpọ ego oke oke) na ụlọ akụ azụmaahịa. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa n’otu ebe, a ga-enwe ọtụtụ mgbe ọ bụla n’ihe banyere ọnụahịa e hotara - ma ọnụahịa ndị dị elu ma dị ala.
Fọdụ ndị na-enye ego nwere ike ịnwe ọnụego dị elu mana obere ịjụ ahịa, na-ebute mgbasawanye siri ike. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-eweta ọrụ ga-enwe ọnụahịa dị ala, mana ọnụahịa na-ajụ elu, na-eme ka mgbasawanye buru ibu. Dịka onye ahia, ị nwekwara ike ịzụta ụzọ ego na ọnụ ala dị ala site n'aka otu onye na-eweta ya, ma resị ya ndị ọzọ na-eweta ego maka ndị ọzọ. Nke a bụ ụdị mma nke ndị na-ere ahịa ọzọ anaghị enye.
Otutu Akụ Dị
E nwere ọtụtụ klas dị iche iche dị iche iche sitere na ndị na-ere ECN kacha mma, ndị a na-abụkarị ndị a:
Ntụle Mgbe oshọrọ forchọ Ndị Kachasị Mma ECN
Ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa ECN dị adị na-arịwanye elu kwa afọ. O yikarịrị, nke a bụ n'ihi na ahịa ahụ abụghị ebe etinyere, yabụ ndị ahịa nwere ohere ịnweta ọnọdụ ahịa na ọnụọgụ dị ukwuu dị ukwuu. Nke a na-adọrọ mmasị ndị na-ere ahịa na ndị ahịa.
Dịka e kwuru na mbụ, enwere ike ịtụle ndị na-ere ECN ka ọ na-adọrọ mmasị maka ndị na-etinye ego na-achọ imekwu azụmahịa, n'ihi na ndị ahịa a na-enye ndị na-amaghị aha ha aha.
N'ikwu nke a, tupu ịme mkpebi nke onye na-ere ECN ziri ezi maka gị, enwere ihe ole na ole ịchọrọ iji jide n'aka na mbụ - nke anyị depụtara n'okpuru.
Re Na-achịkwa Ha nke Ọma?
Ọ dị mkpa na onye na-ere ahịa ECN ị họọrọ ga-ezute opekata mpe ọkwa ụlọ ọrụ kacha nta. Ọ dịkwa mma ijide n'aka na onye na-ere ahịa nwere ụfọdụ ọnụnọ na mba ị bi na ya, ebe ọ pụtara na otu usoro iwu ga-achịkwa gị. Nke a nwere ike ime ka ọtụtụ ihe ghara inwe mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ihe anaghị eme atụmatụ.
Onye ọ bụla na-ere ahịa na UK nwere ikike iji iwu jide ya FCA ikike (Financial Conduct Authority). Mgbe ị na-eji onye na-ere ahịa ejiri ikikere zuru oke, ị ga-ejide n'aka na nchekwa dị iche iche nke iwu UK / EU gosipụtara.
Ekewapụ Ndị Ahịa kewapụrụ ekewa
Anyị gosipụtara na mbụ mkpa ọ dị ịhọrọ onye na-ere ahịa nke nwere ikikere zuru oke ma dezie ya. Might nwere ike inwe mmasị ịmara na uru ọzọ nke ikike a bụ na IPS ga-ekpuchikwa gị, nke na-anọchi anya Atụmatụ Nchedo Ndị Ọchụchọ.
IPS na-eme ka o doo anya na ego gị niile sitere na ego onye na-ere ahịa. Fọdụ ndị na-ere ahịa na-eme akaụntụ nkeonwe na aha ụlọ ọrụ ha, mana jide ego gị iche. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị na-ere ahịa nwere ike ịmepụta akaụntụ na aha gị ma debe ego gị ebe ahụ.
Dabere na ọkwa nchekwa ego nke a ga - enye gị udo nke uche na ihe nwute nke onye na - ere ahịa na - enweghị ego. Nke a bụ n'ihi na ego gị agaghị akwụ ụgwọ ụgwọ onye ji ụgwọ nke ya.
Ọrụ na mgbasa
Ndị ahịa na-echekarị ihe na-agbasa agbasa ECN. Dika anyi deputachara na ntuziaka a, ihe di mfe bu na ha na - achikota otutu ndi na - enye ego mmiri tinyere ọnụahịa ha.
Nhọrọ ị na-arịọ ka ị rịọ nhọrọ ga-abụ nnukwu, ma n'ezie, a ga-enwe ụfọdụ ndị na-enye ego mmiri na-enye nnukwu ọnụahịa na ọnụ ala ịrịọ. Ma, a ga-enwe ndị na-enye onyinye na-akwụ ụgwọ ọnụahịa dị ala na ọnụahịa na-ajụ elu.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ dịkarịa ala ị nwere nhọrọ dịgasị iche iche dị mma ịhọrọ, ọ bụghị ma ọlị n'ihi na otu ECN Forex forex na-anakọta nkwupụta mgbe niile.
Nkwụnye ego na ndọrọ ego
Enwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi kwụọ ụgwọ akaụntụ ECN gị, agbanyeghị, usoro nyocha ọ bụla ga-adịtụ iche.
Ndị na-ere ahịa ECN kachasị mma na-enye ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche ịhọrọ. Nhọrọ ịkwụ ụgwọ kachasị dịkarịsịrị:
Ebe E Si Nweta na debit kaadị; dị ka Mastercard na Visa.
E-wallets; dị ka Paypal, Skrill na Neteller.
A na-ejikarị Ngwaọrụ ahia na ihe ngosi
You'll gha acho ihu na onye ahia ECN gi hoputara n’enye ndi mmadu ihe omuma. Nke a kwesịrị ịgụnye ụdị nke:
Ndekọ Ike Dị Ike (RSI)
Parabolic Kwụsị ma laghachi (SAR)
Nkezi Ntụziaka Ntuziaka (ADX)
Dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ị na-emeso, ịkwesịrị ịma na ị nwere ike ịtụ anya ọkwa dị mma nke ndị ahịa.
Ebe ọtụtụ ndị na-ere ahịa ECN a ma ama nwere nnukwu ndị otu na-akwado ndị ahịa maka ndị ahịa ya, otu n'ime ụzọ ị ga - esi nweta nghọta bụ ịlele nyocha ndị ndị ahịa ndị ọzọ hapụrụ. Okwu ọnụ bụ ihe na - egbochi ndị ahịa ịlaghachi.
N'ikwu eziokwu, dị ka ìhè na ọchịchịrị ọtụtụ ihe dị mma na-esite na ndị na-adịghị mma. N’iburu nke a n’uche, anyị ga-agwa gị ụfọdụ ọghọm ndị nwere ike ijikọ aka na imepe akaụntụ yana onye na-ere ahịa ECN.
Ndị na-ere ahịa ECN anaghị agbasa dị ka ụgwọ ọrụ, yabụ na ha ga-edozi ụgwọ na ọrụ maka azụmahịa ọ bụla. Ọ dabere na etu ọrụ ndị ahụ si buru ibu na ihe azụmaahịa gị bụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị na-ere ECN adịghị mma maka obere azụmaahịa, ebe ọ bụ na ụgwọ ọrụ ga-aba uru gị nwere.
Ihe nkwụnye ego dị elu
Iji mepee akaụntụ na ECN broker, ị ga-ahụ mgbe mgbe na nyiwe na-atụ anya ka ego nkwụnye ego dị elu. Nke a ruru ụgwọ ọrụ dị elu, yana eziokwu ahụ bụ na ha na-enye gị ohere ka gị na ndị na-enye ego na-ekwurịta okwu.
Dịka ndị na-enye ego nwere ike ịnwe nnukwu ihe achọrọ na ụgwọ ọrụ, ndị na-azụ ahịa ahịa nwere ike mgbe ụfọdụ ijide ọnọdụ nke ego ego 10,000 (ma ọ bụ nza 0.1) Nke a pụtara dị ka onye ahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepe ọnọdụ maka ihe na-erughị ọnụ ọgụgụ a, gị agaghị ekwe ka.
Ekwesịrị m iji ECN Broker?
Fọdụ ndị ahịa na-ahụ nyiwe ECN dị mgbagwoju anya ma sie ike iji, yabụ ọ bụrụ na ị na-amalite, ọ nwere ike ọ gaghị adabara. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ bụrụ na ị n'ezie ịchọrọ ịzụ ahịa na onye na-ere ahịa ECN, ọ ga-aba uru ịme nyocha nke gị na ịmụ otu esi arụ ọrụ maka onwe gị.
Anyị na-eche na ezi ihe karịrị ihe ọjọọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ irite uru site na mgbasawanye na-emeghe ma mepee nnukwu ọnọdụ. Na mkpokọta, ọ bụrụ na ị nwere obere ego, anyị na Mmụta 2 Trade ga-akwado ịrapara na ndị na-ere ahịa STP maka ugbu a.
Debanye aha site na ECN Broker - Otu esi eduzi
Ugbu a ị jirila ozi niile ịchọrọ na ndị na-ere ECN, ikekwe ịchọrọ ibido.
Nke mbu, n'ezie, ikwesiri ikpebi nke onye na-ere ECN kacha mma maka mkpa gị. Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa si ebe ahụ ịhọrọ, ọ ga-adị mma mgbe niile ịme ụfọdụ nyocha nke gị tupu ịmezuo ya.
Nzọụkwụ Otu - Chọta onye na-ere ECN Broker
Ma ị maghị nke onye na-ere ahịa ECN dabara na mkpa gị? Toghara ichegbu onwe anyị, ndị ọkachamara anyị na Learn 2 Trade ejirila ndepụta nke ndị na-ere ahịa ECN kacha mma iji nyere gị aka ikewa ọka wit na igbogbo ọka. Enwere ike ịchọta nke a na njedebe nke ndu a!
Nzọụkwụ abụọ - Mepee Akaụntụ
Mepee akaụntụ ahia site na ijuputa mpempe ndebanye na ozi gị. Nke a bụ ụkpụrụ omume na onye ọ bụla na-ere ahịa.
Adreesị ebe obibi
Nkọwa kọntaktị, dị ka email na akara ekwentị
Tinye ozi ego ọ bụla achọrọ ma ọ bụ akụkọ ntanetị (nke a ga - adị iche n'etiti nyiwe dị iche)
Nzọụkwụ atọ - Identification
Ugbu a, ọ ga-adị mkpa ka ị nyefee ihe akaebe gị nke njirimara. Ọzọkwa, nke a ga-adị iche, mana na-ekwukarị, naanị ị ga-eziga otu akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ kaadị njirimara mba gị.
Fọdụ ndị na-ere ECN nwere ike ịchọ ihe akaebe ọzọ banyere onye ị bụ; dị ka ụgwọ ọrụ, ụgwọ ekwentị ma ọ bụ akwụkwọ ozi ọ bụla nwere aha gị na adreesị obibi gị.
Nzọụkwụ anọ - Nkwenye
A ga-enyocha njirimara gị na nkọwa onwe gị dabere na ụkpụrụ. Emekarị, ị ga-enweta nkwenye nke a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ọ na - eri ogologo oge, ọ nweghị ihe ga - egbochi gị ịkpọtụrụ ndị otu na-ahụ maka ndị ahịa ECN, ha ga-enwe ọ happyụ karịa ịchụ gị oge.
Nzọụkwụ ise - ego nkwụnye ego na-amalite ịzụ ahịa
Ugbu a, ị ga-enwe ike ịbanye na akaụntụ gị, setịpụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ ị họọrọ, ma tinye ụfọdụ ego. Ozugbo e nyere ego na akaụntụ gị, ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa ozugbo.
Dị ka akụkụ n'akụkụ, ọ bara uru ịlele ma enwere akaụntụ ngosi ECN iji nyere gị aka ịchọta ụkwụ gị.
5 Best ECN Brokas nke 2021
Inweghi oge ichoro onye ahia ECN onwe gi? Echegbula - dịka anyị na Mụọ 2 Trade ji ọrụ siri ike maka gị rụọ ọrụ!
N’okpuru ị ga - ahụ 5 kacha mma ECN broka nke 2021 na karịa.
1. Forex.com– Kachasị mma ECN Broker
Forex.com bụ ọkachamara na-azụ ahịa ego na-enyekwa klaasị akụ ndị ọzọ. Nke a gụnyere CFDs n'ụdị ebuka, ngwa ahịa na indices. N'ime ihe ọ na-akpọ GTX Direct, Forex.com na-enye ebe a na-azụ ahịa ECN zuru oke.
Nke a pụtara na ị ga-agba nkịtị ga-ezi uche asọmpi ụgwọ, mgbasa, na isslọrụ. Site na ihe karịrị 90 forex abụọ na-enye, ị ga-enwe ohere ịnweta nhọrọ zuru oke nke ndị isi, ụmụ aka, na exotics. N'ụzọ na-akpali mmasị, ikpo okwu na-enye gị ohere ịmalite site na nkwụnye ego kachasị naanị $ 50.
Uzo ahia ECN di elu.
$ 50 nkwụnye ego kacha nta
Karịrị 90 ụzọ abụọ akwadoro
Ngwurugwu ECN ndị ọzọ n'ahịa na-asọmpi na ụgwọ
2. FXTM– Onye ECB kacha mma maka Broker Commissions
FX TM bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke FCA na CySEC na-achịkwa. Ga-enwe ike ịzụ ahịa ihe niile site na Forex, ngwongwo, ọla ntụ, na ebuka - niile n'ụdị CFDs. Ihe ndekọ ECN ya chọrọ nkwụnye ego kacha nta nke $ 500, ị ga-erite uru site na ọrụ efu na mgbasa ozi siri ike. Ga-enwe optoin nke iji nyiwe nke atọ ndị ọzọ MT4 na MT5.
A kwakọbara ngwongwo ego
$ 500 nkwụnye ego kacha nta
Gaa Leta FXTM
3. Pepperstone Markets– Ezigbo ECN Broker Advanced Trading Platform
Pepperstone Markets bụ nnukwu ikpo okwu ntanetị n'ịntanetị nke na-enye ma akaụntụ STP na ECN. Ga-enweta ohere zuru oke nke nyiwe azụmaahịa - gụnyere MT4, MT5, cTrader na ZuluTrader.
Nke a dị mma maka gị nke chọrọ ọgụgụ eserese na ịbịaru ngwaọrụ, yana ike itinye robots na-akpaghị aka. Ọ na-anabata ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, dịka kaadị debit / kaadị, Paypal, na nnyefe ego. Nchebe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na a na-enye gị, ị nwere ike itinye aka na ịgba ọkụ na ịgba egwu na-enweghị nchegbu.
Feesgwọ dị ala na mgbasa.
Otutu ugwo uzo akwadoro
Họrọ site na nyiwe ahia anọ dị iche iche
Real-oge ozi ọma bụ a bit isi
4. Chee echiche Markets– Best ECN Broker For High Leverage
Chee echiche ahịa bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-ejide ọtụtụ ikikere nchịkwa. Nke a gụnyere - gụnyere FCA. N'etiti ọtụtụ ụdị akaụntụ ndị ọzọ, Chee echiche ahịa na-enyekwa akaụntụ ECN. Ndị na-ere ahịa a na-ewu ewu na ndị ahịa chọrọ ịnweta oke leverage dị elu. Nke a guzo na 1: 500 buru ibu ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ọkachamara.
Gaa Leta Chee Ahịa
5. Robo Forex - Akaụntụ ECN Na-agbasa 0
Robo Forex bụ usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị nke na-enye akaụntụ ECN. Nwere ike ịmalite na nkeji, na nkwụnye ego kacha nta na-amalite na $ 10. Nke kachasị, ị gaghị agbasa agbasa ọ bụla mgbe ị na-azụ ahịa site na akaụntụ ECN gị. Ikpo okwu bụ ụlọ nke nnukwu ego na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Opekempe nkwụnye ego naanị $ 10
Executiongba ọsọ ọsọ ọsọ
Dịtụ amaghị na brokerage idaha
Gaa na Robo Forex
Ekele maka igbu ahịa azụmaahịa na ọnọdụ azụmaahịa, anyị chere na onye na-ere ECN na-enyere ndị ahịa oge aka ịbanye ọnọdụ n'ụzọ dị mma karị, mana nke ka mkpa - uru karịa.
Site na igbutu onye ozo enwere otutu ihe karie. Site na iwepụ esemokwu nke ọdịmma, a na-ahụkarị ndị na-ere ECN kacha mma ka ọ bụrụ ụzọ ntụkwasị obi na nchekwa nke azụmaahịa. Nke a bụ n'ihi na onye na-ere ECN gị ga-arụ ọrụ ọ bụla n'agbanyeghị na ị tufuru ego ma ọ bụ nweta uru.
Cheta mgbe niile, ndị na-ere ahịa na-achịkwa iwu ga-agbaso iwu na iwu siri ike ma a bịa na nchekwa nke ego azụmaahịa gị. N'iburu nke a n'uche, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ECN gị na-achịkwa otu ikikere ma ọ bụ karịa, ahụ - ị maara na ị nọ n'aka aka. Dị ka ndị dị otú a, anyị na Mmụta 2 Trade agaghị akwado onye na-ere ahịa na-enweghị nchịkwa na weebụsaịtị anyị.
Tupu ị mee mkpebi ikpeazụ banyere ụdị onye na-ere ahịa ị chọrọ iji, ọ dị mkpa ịme nyocha. Enweghị ndị na-ere ahịa abụọ bụ otu, ngwaahịa na ọrụ ha a na-enye ga-adịtụ iche.
$ 200 Min ego
Nkwụnye ego dị ka $ 10 iji malite ahia
Commlọ ọrụ Super-low na mgbasa ozi siri ike
Forex forex, crypto, ngwaahịa, na indices
$ 10 Min ego
Ahịa mmiri mmiri nke ukwuu ka ị wee nwee ike ịba ụba
Jikwaa ahia gị na akụrụngwa anyị echedoro ma zoo
Tinye na ahịa dị ka $ 100
$ 500 Min ego
N'ime ahịa 4,500 gụnyere FX, mbak, cryptos, indices na ngwaahịa
Irite nkwụghachi ụgwọ na azụmaahịa azụmahịa kwa ọnwa mgbe ị ruru eru maka Onye na-azụ ahịa nọ n'ọrụ
Ọnụ ahịa ahịa kachasị dị ala maka ahịa ahịa crypto *
$ 100 Min ego